Momba anay - Anhui Lihua Wood Composite Co., Ltd.
Anhui Lihua Wood Composite Co., Ltd. dia ny Teknolojia Avo sy Vaovao. Enterprise, mandrakotra zavamaniry 15000 metatra toradroa, miorina ao amin'ny valan-javaboary Langxi, ny fihaonan'i Anhui, Zhejiang ary faritanin'i Jiangsu, mankafy ny fidirana amin'ny tambajotram-pitaterana lehibe. Ny orinasanay dia mampifangaro ny famolavolana, ny fikarohana, ny varotra ary ny fampiharana ny akora plastika vita amin'ny hazo amin'ny famokarana.
Manana tsipika famokarana 24 miaraka amin'ny famokarana 20.000 taonina isan-taona izahay, izay manome antoka ny vokatra azo antoka sy ara-potoana mamatsy. Ny vokatra lehibe indrindra dia ny: WPC decking, WPC wall cladding, WPC fefy, WPC handrail, WPC pergola, WPC poti voninkazo ary WPC bench and pavilion. Ny karazana fitaovana rehetra dia amboarina miaraka amina fomba fanao henjana QC.
Manana ekipa QC izahay izay manana traikefa mihoatra ny 3 taona eo amin'ny sehatra. Ny vokatra dia zahana isaky ny fizotrany. Ny sasany amin'izy ireo dia andrana amin'ny antoko fahatelo. Mampahafantatra ny rafitra fanaraha-maso kalitaon'ny ERP sy ny rafitra famokarana koa izahay. Mazava ny rehetra ary fehezina amin'ny dingana iray. Amin'ny ankapobeny dia mpiasa eo an-toerana izahay, niasa nandritra ny taona maro izy ireo teto miaraka amin'ny traikefa amin'ny famokarana tsaratsara kokoa. Ireo injeniera lehibe dia niasa tamina fitambarana nandritra ny 10 taona mahery.
Manana ekipa mpivarotra izahay na amin'ny tsena an-trano sy any ivelany. Izahay dia mifantoka amin'ny marketing, vokatra vaovao ary teknolojia, manohy manova sy manandrana ny teknolojia vaovao sy ny vokatra vaovao. Manana ekipa serivisy tanora sy matanjaka izahay miaraka amin'ny valiny haingana sy ny fahaizan'ny fifandraisana tsara.
Ny mpanjifanay dia avy any Eropa, Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Afrika, Moyen Orient ary Aziatika. Ny vokatra Lihua dia nosedraina SGS niaraka tamin'ny fenitra fanaraha-maso kalitao WPC an'ny EU EN15534-2004, ny fenitry ny haintrano Eoropeana misy ny naoty B naoty ary ny ASTM an'ny fenitra WPC amerikana. Izahay koa dia voamarina amin'ny IS09001-2008 Quality Management System, ISO14001: 2004 Rafitra fitantanana tontolo iainana, FSC ary PEFC. Tongasoa eto hitsidika ny orinasa.
Tombony:Ny vokatra dia manana kalitao sy trosa tsara ahafahantsika manangana biraon'ny sampana sy mpizara maro eto amin'ny firenentsika.
Teknolojia:Izahay dia maharitra amin'ny kalitaon'ny vokatra ary mifehy tsara ny fizotran'ny famokarana, manolo-tena amin'ny fanamboarana ny karazany rehetra.
Serivisy:Na mialoha ny varotra izany na aorian'ny fivarotana, dia hanome anao serivisy tsara indrindra hampahafantatra anao izahay ary hampiasa haingana ny vokatray.
Famoronana fikasana:Mampiasa ny rafitra famolavolana mandroso sy ny fampiasana ny fitantanana rafitra fitantanana kalitao iraisam-pirenena mandroso ISO9001 2000 ny orinasa.
Kalitao tsara:Ny orinasa dia manokana amin'ny famokarana fitaovana avo lenta, hery ara-teknika matanjaka, fahaiza-manao fampandrosoana matanjaka, serivisy teknika tsara.
Ekipa teknika matanjaka:Manana ekipa teknika matanjaka amin'ny indostria izahay, traikefa matihanina am-polony maro, haavo famolavolana tena tsara, mamorona fitaovana manan-tsaina avo lenta avo lenta.
Fanesorana WPC ivelany, Fanapahan-tsokosoko WPC, Fanesorana ivelany WPC, Fitaovana WPC, Rihana fametahana WPC, fametahana plastika vita amin'ny hazo,